WORM AMIN'NY ALIKA, KANKANA, KANKANA, KANKANA, KANKANA KARAVASY, KANKANA MISY SARY - ALIKA
Worm amin'ny alika, kankana, kankana, kankana, kankana karavasy, kankana misy sary
Betsaka ny kankana isan-karazany izay mety hisy fiantraikany amin'ny alikao: kankana, kankana, kitrokely, karavasy ary kankana. Ny sasany miaina ao anaty tsinay ary ny sasany ao amin'ny tavy. Ny kankana maro dia tsy mametraka olana amin'ny alikanao mihitsy, ary tsy ho fantatrao akory fa eo izy ireo. Ny kankana sasany dia azo zakaina amin'ny isa vitsy, fa ny isa marobe kosa dia mety hiteraka olana lehibe.
manao ahoana ny koka amin'ny alika
Amin'ny ankapobeny ny alika dia tokony hotsaboina isaky ny enim-bolana ho an'ny kankana sy ny fady. Izy ireo no tena fahita indrindra, ka ny krizy boribory no olana lehibe kokoa.
Ny alika kely dia tokony ho tsaboina manomboka amin'ny taona 2 ka hatramin'ny 3 herinandro ary isaky ny 2 herinandro aorian'izay mandra-pahatongan'ny alika kely eo amin'ny 3 volana araka ny torohevitra nomen'ny mpitsabo anao ny dokotera. Aza hadino ny manala ny tohodrano. Miresaha amin'ny mpitsabo anao.
TSY MAINTSY mijery amin'ny mpitsabo biby any an-toerana ianao mba hahalalanao izay any amin'ny faritra misy anao, sy ny fomba tokony hitondrana ny alikanao na ny alikanao.
Amin'ny atitany rehetra misy alika dia misy atody boribory.
Kodiarana boribory: (Toxocara canis)
Ny kankana boribory, antsoina koa hoe ascarid, dia miloko fotsy. Izy ireo dia toy ny sombin-spaghetti masaka ihany, ary miaina ao amin'ny tsinay alika. Izy ireo dia afaka mahatratra hatramin'ny valo santimetatra ny halavany (20cm) ary mamahana ny sakafon'ny alikanao, ao amin'ny tsinay. Ny kankana boribory mandatsaka atody tsy tapaka. Azonao atao ny mitsabo ny alikanao amin'ny kankana boribory isaky ny enim-bolana, NA azonao atao ny manandrana azy ary tsy mitsabo afa-tsy ny alika misy azy ireo.
Ny kankana boribory dia mifindra manerana ny ra mankany amin'ny havokavoka , voakohaka, ary matetika natelina. Indraindray dia afaka mamakivaky ny atiny sy ny ati-doha ny olitra.
Mety tsy hitanao mihitsy ireo kankana ireo, ary indray andro dia mety hivoaka eo amin'ny fivorian'ny alika ny olona iray. Izy ireo dia mety hiteraka fivontosana, fivalanana ary fandoavana. Mety hijanona tsy hihinana intsony ny alikanao, rehefa avy nandalo dingana mihinana sakafo be loatra ary noana foana.
Ao amin'ny alika kely alika kely alika tsaboina dia mety hahatonga ny tsinay ho vaky. Ny alika kely dia mahazo kankana avy amin'ny reniny, satria ny kankana an-doha dia mifindra any an-kibo, na mankamin'ny tratrany. Ny tohodrano bevohoka dia azo tsaboina amin'ny kankana boribory, ary tokony. Anontanio ny dokoteranao.
Ny alika dia tokony ho kivy amin'ny fientanam-po any amin'ny toerana filalaovan'ny ankizy, satria mampidi-doza indrindra ho an'ny ankizy ny kankana. Ny atody boribory dia mety matory ao anaty boaty fasika mandritra ny taona maro. Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny mpampiantrano ny zaza izy ireo dia afaka mifindra any amin'ny atin'ny zaza, havokavoka, maso na ati-dohany ary lasa voafehy maharitra.
ozona tany am-boalohany amidy
Tapeworms (karazana Taenia sy dipylidium)
Ny tapeworm dia toy ny sombin-bary amin'ny seza fa tsy ao anatiny, na indraindray hita miraikitra toy ny atody fotsy kely amin'ny vody alika. Ny alika misy kankana dia matetika scoot manerana ny gorodona .
Misy karazam-pitaoma vitsivitsy. parasy mitondra kitapom-borona, ka raha manana parasy ny alikanao, na manana parasy, dia misy vintana lehibe mety ahazoany onana ( jereo parasy fanoratana ). Raha mihinana parasy ihany koa ilay alika dia mety manana kankana.
Ny kankana mahazatra dia tsy mamono paompy matetika, ka mila kankana matanjaka kokoa.
Betsaka ny dokotera no milaza ny kankana ho an'ny kankana sy kankana manodidina ny 6-12 volana.
Tsy azonao atao ny mitsabo tohodrano bevohoka na mitaiza, na alika kely noho ny saro-pady.
labozy pitbull orona mena mifangaro
Toy ny kankana boribory, ny olona dia afaka mahazo koa ny kankana. Ny olona dia afaka mahazo kankana manafosana parasy avy amin'ny alika, izay tsy sarotra ny mihevitra ny parasy iray dia kely dia kely, mety hipetraka eo ambonin'ny takelakao, na ny tananao izy, ary hoentina tsy voamariky. Ny tabilao dia tsy mampidi-doza amin'ny alika, fa antsoin'ny sasany ho toy ny katsentsitra marani-tsaina, nefa mety hampidi-doza amin'ny olona izany, ka miteraka aretin-atiny mafy.
Ny tapeworm raha ny tena izy dia misy fizarana fotsy maro, mitambatra toy ny kasety. Miara-manao kasety izy ireo ary mety hahatratra ny tongotra maromaro. Avy eo izy ireo dia midina hihamaro. Ireo fizarana no hita rehefa nilatsaka izy ireo. Ireo sombin-javatra ireo dia misy atody izay toa vary goavambe.
Hijery sary tapeworm misimisy
Toa kankana boribory, nefa manana nify amin'ny tendrony iray izay misintona ny tsinain'ilay alika ary mifikitra amin'ny nify maranitra enina, misotro ra misy ra. Manova ny tranokala mifangaro enina isan'andro farafahakeliny. Misy fahaverezana rà hamahanana ny kankana mampihena ny rà, fa ny ankamaroan'ny rà kosa dia very eo amin'ny toerana misy ny detachment mandra-pahasitranany, ka miteraka tsy fahampian-dra sy tsy fahampian'ny vy. Raha kankana tsy voatsabo dia mety mamono alika, indrindra ny alika kely. Ny alika kely dia afaka mahazo ny kankana amin'ny alàlan'ny rononon-dreniny. Raha maty ny sasany amin'ireo alikakely ao amin'ny fako, dia tokony hoheverina ho anton-diany ny hookworms. Deworming dia tsy maintsy averina ao anatin'ny 30 andro eo satria ny kankana ihany no mamono ny kankana mipetraka amin'ny lalan'ny GI. Ny kankana faharoa dia namono ny kankana izay tao anatin'ny fizotry ny fifindra-monina, izay mety nahavita ny tsingerin'izy ireo tao anatin'io fe-potoana io. Raha tsy averinao ny kankana afaka iray volana eo ho eo dia haka ny tsinay indray ny kankana.
Ny kankana sy karavasy dia mpandatsa-dra. Izy ireo dia afaka manao anemie pupme.
Mipetraka ao am-po sy lalan-drà be ny kankana. Enina santimetatra eo ho eo ny halavan'izy ireo. Moka no mamelatra azy ireo. Ilay moka misy lavaka hazo, izay miompy amin'ny hazo terebinta, dia tena mahay manaparitaka aretin-tratra. Mipetraka amin'ny faritra misy ny hazo terebinta izy ireo. Raha manana hazo terebinta eo amin'ny faritra misy anao ianao, dia azo inoana fa mipetraka amin'ny faritra misy korintsana. Tsy misy soritr'aretina mihitsy ny kitrotro mandra-pivoaran'ny aretina. Rehefa miseho ireo soritr'aretina dia mitovy amin'ny soritr'aretina vokatry ny tsy fahatomombanan'ny fo-indraindray miteraka torana, mikohaka, sahirana miaina, palitao malaso, tsy fahampian'ny angovo ary kibony mihalehibe. Azo sorohina ny kankana. Ny alika dia tokony hotsapaina ho an'ny aretin-tratra, avy eo omena fanafody fisorohana. Tsy fahendrena ny miandry mandra-pisehoan'ny soritr'aretina alohan'ny hitsaboana an'io kankana mampidi-doza io. Miresaha amin'ny mpitsabo anao.
Ny alika rehetra amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainany dia manana kankana, saingy amin'ny fitsaboana maoderina dia esorina mora foana izy ireo ary tsy mampaninona ny biby fiompinao. RAHA ny alika REHETRA dia tsaboina amin'ny kankana matetika, dia mety hihena be ny loza ateraky ny fahasalaman'ny olombelona.
Tsy hitan'ny maso miboridana. Vet diagnosis ihany.
Nahazoana lalana avy amin'ny MistyTrails Hipedia
Mifanohitra amin'izay atolotry ny anarana azy, ny kankana dia tsy kankana. Izy io dia aretina azo avy amin'ny holatra amin'ny hoditra izay mifindra amin'ny alika, biby ary amin'ny olombelona hafa. Betsaka ny fitsaboana isan-karazany ao anatin'izany ny fanondranana solifara izay azo vidiana ao amin'ny tranon'omby. Ny fomba fanao holistic dia ny fampiasana menaka neem hafa izay voaporofo fa mamono holatra sy bibikely isan-karazany. Miaro ny bibikely koa izy io. Mane Tail Groom (M-T-G), izay ampiasaina indrindra amin'ny soavaly, dia azo antoka sy mandaitra ampiasaina amin'ny holatra ringworm.
Ratra amin'ny alika
Merle omby mena Aostraliana alika
© Ivon-toerana momba ny fiompiana alika ® Zo rehetra voatokana
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Tapeworm
Maninona ny alika no mitarika ny vodin'izy ireo manerana ny gorodona
Miady amin'ny hazondamosina atahorana
Misimisy kokoa momba ny Flea
Aretim-pivalanana amin'ny alika sy alika kely
alika lahy sy vavy miaraka
karazana alika izay manomboka amin'ny z
sisin-tany collie cocker spaniel mix
alika shih tzu yorkie mifangaro